Soo dejisan Dropbox 7.2.8 – Android – Vessoft
DropBox – software ah in la kaydiyo daruur shaqeeyaan. Software The kuu ogolaanayaa inaad si loo badbaadiyo files warbaahinta, dokumentiyo qoraal ama images kaydinta daruurtii oo ku siin in ay soo bixi files helaan guud. DropBox taageertaa .Wadashaqayntaas si toos ah macluumaadka u dhexeeya noocyada kala duwan ee qalabka. Software wuxuu bixiyaa heer sare ah ilaalinta file taas waxaa lagu gaadhi karaa gudbinta xogta on channel potilasasiamies.terveyskeskus iyo kaydinta macluumaadka ku jira foomka xajin lagu sameeyo. DropBox ku hayaa taariikh isbeddel ah ee lagu kaydiyo iyo u saamaxaaya in ay soo kabsadaan ka files tirtiray inta lagu jiro mudada waqti go’an.
Dajinta Easy faylasha kaydinta daruurta
Synchronizes xogta u dhexeeya qalabka kala duwan
Waxay siisaa inaad kala soo baxdo files helaan guud
Heerka sare ee ilaalinta xogta
Kartida inuu ka soo kabsado files tirtiray